कलियुगका कुरा: फिल्म झेलियो...
विदेशीको पुरानो वर्षको अन्तिम दिन नेपाली फिलिम एक दिन र एक रात र नयाँ वर्षको पहिलो दिन हिन्दी फिलिम तीस मार खान हेरियो। हेरियो के भन्नु दुई/ढाइ घन्टा झेलियो। फिलिम हेर्ने उमेर गयो कि वुद्धि पुगेन कुन्नि...यो वर्षभर सकारात्मक सोच मात्र राख्ने भनेको त्यसैले फिलिमलाई नराम्रो त भन्नु भएन। त्यस्ता फिलिम रुचाउने धेरै होलान् त र पैसा लगा होलान् भन्नै परो..
Sunita Giri and Anil Bhattarai like this.
Bhupal R Raut ho ho tees maar le mero Rs.30 maridiyo ni haha Jasto nam tyastai kam
Anil Bhattarai haaa,,,,,heriyo bhanda pani jheliyo...sahi ho!!!!!!
Jaw Knock Raazaa एक दिन एक रात त हेर्याछैन तर तीस मार खाँ भन्ने को चाँही एउटो पाइरेटेड डि भि डि ल्या को फुटपाथाट ३० रुप्पे मा । त्यै नि थक्क थक्क लाइरछ । के फिलिम बनाको होला त्यल्ले । शिला कि जवानी बाहेक हेर्न हुने केइ छैन । त्यो जाबो गीत त बत्ती आउन मात्रै पर्छ टि भि मै आको आकै गर्छ नि । :))